Ma jiro diin ka sareysa Runta - AFRIKHEPRI
Ma jiro diin ka sareysa Runta
Ma jiro diin ka sarraysa runta
LCaqiido qarsoon ayaa la mid ah “Hermetic Doctrine”, “Esoteric Doctrine” iyo dareenkooda dhabta ah, “Sciult Sciences”. Tixgelintan waxaa loo aaneeyey waqtiyadii hore si loo baro wax-barashada oo dhan oo la xidhiidha abuuritaanka caalamka, dhismaha iyo meel kasta oo ay ku jiraan - oo ay ku jiraan nin dambe.
waxbarista Kuwan waxaa laga soo saaray magaca "fahmayn Madhabta," "Hermetic Madhabta" ama "Secret Madhabta" in ay la kala saaro hadda transient oo ka mid ah dugsiyada kala duwan oo fikirka ah falsafada iyo sayniska jirta ee dunida, iyo in aan ku lifaaqan - ama ma qabsado - si toos ah ama si dadban, waxa uu.
Caqiido-yahanku waa, iyadoo la eegayo qaabkeeda iyo hababka loo soo bandhigayo, iyada oo loo beddelayo sida taariikhda ragga, laakiin sida walaxda, maadaama ay barayso Sharciyada Diiwaangashan, waa jaahilnimada aduunka. Taasina waa sababta ay Masaarida qadiimiga ah ugu yeedhay "Starry Sky Doctrine".
Waxbarashadani waxay u badnayd dadyowga ka soo jeeda Atlantis waxaana loo gudbiyey Hindiya laga soo bilaabo halka ay ka soo baxday Bariga, Chaldea, Masar iyo Masar ee Giriigga. Waxay gaarsiisay aqoon iyo hubaal wax ku ool ah sababtoo ah waxa ay jiifsatay - oo wali been ah - waxqabadyada xun ee la xariira xaaladaha aadanaha:
Qarsoodiga nolosha iyo dhimashada
Caabbi labadaba jir ahaan (jirro, jirdil) iyo anshax
Dhibaato joogto ah ama joogto ah ama dib u cusbooneysiiyay
Waa lagama maarmaan tahay in shaqa xanuun badan loo helo cunto, saqaf iyo dhar dabeecadda dabiiciga ah oo weli gacanta ku haysa ninka ...
Dhammaan diimaha waaweyn waxay ku hawlan yihiin dhiirigelinta aadanaha si uu naftiisa uga xoroobo xaalada dunida; in ay u yeeraan safarkan "Dib u Celinta", "Liberation", "Rise", iwm. Waxay ku tilmaameen xaalad khatar ah oo ka jirta halkan hoos ku xusan, oo ku xirnayd imtixaankii wax walba, laga xannibay oo la jabsaday.
Muwaxidiin ah Diimaha adkeeyay fikirka ah "dhici" nafta aadanaha ee xaaladaha nololeed ee aad u cufan (arrinta dhisme dunida dumo) laakiin Philosophy Buddha ay ina xusuusinaysaa in xaqiiqada murugo isku waxaan waydiisanayaan inay ka baxaan "wareega dib-u-dhiska" (reincarnations) oo sidaas darteed joojiya dhibaatada.
Si kastaba ha ahaatee, diimaha ayaa shaaca ka qaaday in marnaba Humanity aqoon dhamaystiran this ee caalamka oo ee ku wajahan bini'aadamka iyo hab ah in la fuliyo si ay u helaan sii daayo this. Taas macneheedu waxa weeye waxa la yiraahdo waxa loogu yeero Galbeedka ee Theurgy ama Divine Magic (Bariga dhexdiisa, waa cibaarada midigta midig). Xataa si fiican, marka qaybo ka mid ah ay rag & dumar kala wadaadnimada (wadaaddadii, Brahmins ah, wadaaddadii, iwm ..) helay dabayl aqoonta this, ay sameeyeen wax walba inuu ka qariyo, inkaar si rasmiga ah in mid ka mid ahaa adhyahooda - on taas oo ay waxay rabeen in ay yeeshaan awood buuxda maskaxiyan iyo maskaxeed - ma aysan ka baxsan.
Waxaan u baahan nahay in la ogaado khadadka sidoo dadaalka ah in rag & dumar iyo haaf Muslim in Hindiya ay ahayd inay wax ka beddelaan qoraalka (iyo bililiqada wanaagsan, sidaa darteed, carmallada hodan by iyaga gubi) in xadgudubyada ay "Aabbayaashow" marka hore ee Masiixiyadda, ee ku adkaaday inay isbedelaan, haddii aan la burburin, waxbariddan qadiimka ah. baabba 'Tani bedelay ee "nafsaddaada ogow oo garo Caalamka iyo ilaahyadii, waa inaad" hal ku dhiga ah ee lagu hogaamiyo lahaa jinniyadu inay tallaabada ugu horreysa ee Science Modern, "Rumeeya, iyada oo aan la ogaado." Sidaas ayaa la fogaadaa Baarista aad u naxo galay isha ma aha oo kaliya ee dogmas qaar ka mid ah diinta kiristaanka (ama qoraalka Reebay Hinduism), laakiin sidoo kale ka mid ah sacraments iyo rasmi ah Theurgical dambe.
Sidaa darteed aqoonkani waa mid muhiim ah oo la yiraahdo "Dhaqanka Asoteric" ama "Dhaqanka Hermetiga" ama "Dhaqanka Asaasiga ah".
Laga soo bilaabo sare oo Tibet meesha aqoonta this xaqiiqada aadanaha iyo universal ayaa isku soo xidhay, oo waxaa sidaas daraaddeed ilaaliyo weerar xaasidnimo, albaabka u furay in West ah dhamaadka qarnigii la soo dhaafay si ay u kala firdhinta Jaahil ah oo u ogolaan dadkuba isu situate in caalamka ah ay fahmi.
Aqoonta noocan oo kale ah ayaa laga heli karaa reer Galbeedkii qarnigii ugu dambeeyay ee dhoola cadeynaya; Cilmi-baadhistu waxay yareeyaan wax yar, sababtoo ah aqoonyahanno badan ayaa tixraacaya "The Secret Doctrine" si ay u hoggaamiyaan cilmi-baariskooda ayna raadiyaan waxa ku yimi "afaf" oo ku qoran luqad qaas ah waxay ahayd xaqiiqo tijaabo ah.
Laakiin waa maxay aqoonkani oo la xidhiidha "Doctrine Secret"?
"Marka laga yimaado waqooyiga Hindiya, boqollaal kun oo sano BC, kadibna waxaa loo gudbiyey Masar, Chaldea, iyo, marka la barbardhigo Giriigga, Aqoonta Sharciga Caalamiga ah ee xukuma Universal (macrocosm) iyo man (Microcosm) iyo hirgelinta kuwan (sidaas daraadeed dhaqamada la xidhiidha ascasiiska, oo abuuray isbedel ku yimid barashada) Waxaa la baray macbudyada, taas oo nin kasta iyo haweenkaba waxbartaa ay heli karaan, oo daacadnimadana si adag loo aasaasay. "
« Aqoonyahankan qarsoodi ah ayuu ahaa oo kaliya ka faa'iidaystayaashu waxay ka faa'iideysteen sababtoo ah caqabadaha, weli wakhti aan loo baahnayn sababtoo ah, inta badan, waxay hoos u dhigtay xaalad bulsheed oo hoose oo ka hortagaysa wax barista, waa in laga ilaaliyo isticmaalka waxyeellada aqoontan. Sidoo kale, waxay u muujisay dadka "qaab diineed", tani waxay noqonaysaa oo keliya hadalkii macquulka ah ee Sharciga Caalamiga ah. Dhab ahaantii, waxbarashadani waxay ahayd mid u gaar ah dadwaynaha oo dhan, laakiin waxa lagu amaahday, in la hirgeliyo, calaamad ku habboon qaabka gaarka ah ee kooxaha asalka ah. Taasina waa, sababta oo ah dhowr arimood oo kala duwan, runta isku mid ah ayaa loo kala qaybiyay. "
"Waxa ay ahayd run this qeexaa magaca jir ah" Theosophy "iyo macnaha halkan aynu u ereygu wuxuu ugu cajiib ah in mar uun laga sameeyey Diimaha, Beenta iyo dhammaan falsafada Dugsiyada ee la soo dhaafay ay qabtaan. Aqoonsiga aqoonta dhabta ah ayaa la soo bandhigay. "
"Sida macallimiinta of Wisdom da'da weynaa, ayay u iishay door biday in ay abid gaartay ee uu qarnigii by Science iyo hadal of ruuxiga ah guud si loo soo celiyo mar kale ku falsafada iyo qaribaadii taas oo horseedaysa Miyuusiga. "
Macallimiintu waxay sidaas u kala qaybsamaan aasaaska, ma aha oo kaliya waxa maanta noqday "Sayniska casriga ah", ee qaybaha kala duwan ee dambe, laakiin sidoo kale dastuurka kakan ee jiritaanka iyo mabda'a muhiimka ah, ee caalamka, ifafaalaha Miyir-qabka. "
"Dhamaan arrintani waxay dhalisay awood ay wax uga qabato arrinka iyo sidoo kale qaab-dhismeedka aan macquulka aheyn ee bini-aadannimada ee Galbeedka Sayniska iyo diimaha ayaa weli iska dhaga-tiraya. "
"Si kastaba ha ahaatee, in ka badan tobaneeyo sano, gudbinta this Secret Doctrine raacay laba jid kala duwan:
In bariga, waxaa ka badbaaday, markii ugu horraysay ee Dugsiyada qarsoon Vedic ee waqooyiga India-sidaa waxa uu ahaa asal ahaan divulguée- iyo in ay taas u bexeen, Masar, Greece iyo Aasiyada Yar horaantii dhammaadkii qarnigii 2aad ee taariikhdeena, qoraallada qaaliga ah ee taariikhda taariikhda reer galbeedku ay isku diyaarinayeen inay burburiyaan. "
« Waxay xoogga saartay, qarnigii toddobaad, ee Tibet. Tani waxay ahayd markii ugu horeysay Buddhist King Song Tsen Gam-po, kuwaas oo keenay Hindiya, wakhtigaas, qoraal gacmeedyada qiimo iyo sidaas iyaga ka burburinta badbaadiyey in ka dib in Hindiya laftiisa, raadad badan ku dhufan qoraal ah ee Macallinka. Naropa, Macallimow Hindiya, dardaarmo iyo qarnigii laba iyo tobnaad, qoraallada kale si Marpa turjumaan ahaa oo iyaga soo celiyey Tibet. Marka qarnigii shan iyo tobnaad, ee Grand Tsong Kaparé deggenayn Tibetan Budiiska, cilmiga - ee dhammaan maaddooyinka ay: cosmogenesis, anthropogenesis, Medicine, xiddigaha, falaga, Theurgy, iwm - waxaa horay si buuxda u badbaadiyey Mugdiga in ay dunida u dhaceen. Tibet ayaa sidaa darteed ilaalin lahaa, aamusnaanta ah Munaasabada Monasteries, Xusuusta Aadanaha. "
Dhinaca Galbeedka: iyada oo loo marayo taariikhda, Aqoontan Caalamkani waxay noqotay mid kala firirsan waxayna noqotay mid qarsoodi ah, sababtoo ah aasaaska ugu waxtarka badan, Theurgy, wuxuu ahaa qalab burburinta ragga oo leh anshax yar. Dhab ahaantii, kuwa lahaa helitaan gaar ah aqoontan gaarka ah, waxay noqon kartaa qaabka wadaaddada laftiisa. "
Waa tan "Transhimalayan Arhat School" oo, iyada oo loo marayo dhexdhexaadinta laba xubnood oo ka mid ah Xubnahan, waxay waxbarashadoodu u gudbiyeen qoraaga "The Secret Doctrine".
Taasina waa sababta aan maanta halkan ugu hayno waxyaalihii ugu fiicnaa ee runta ahaa ee ku saabsan runta weligeed ah ee lagu muujiyay diimaha iyo dhaqanka oo dhan. Dabeecada ugu caansan ee dhaqanka.
Shan xaqiiqo ah oo lagu cadeeyay qoraaga "Esoteric Doctrine":
1 - Aqoonsiga Qarsoodiga ah maaha Barista Atheismmarka laga reebo macnaha ereyga Sanskrit "nâstika", diidmada "sanamyada", oo ay ku jiraan ilaah kasta oo anthropomorphic ah. Marka la eego macneheedu waa wax kasta oo masiixiyadu waa Nastika.
2 - Waxay qiraysaa Logos, ama "Abuuraha" ee Caalamka ; "Demi-urgos" (Demiurge) ee dareenka shaqeeya ee dhismaha sida "abuuraha" ee dhismaha, inkasta oo naqshadeeyahan waligiiba aanu taaban dhagax, laakiin, ka dib markii uu qorshaha siiyey oo shuqulkii gacmihiisana ayuu ka eryay; kiiskeena waxaa qorsheeynay Fiktooriyaasha caalamka, dhismaha dhismaha waxaa loo tagay Legions of Powers iyo Ciidamada Intelligent. Laakiin tan "demi-urgos" maaha ilaah shakhsi ahaaneed, oo ah in la yiraahdo, Ilaah aan caadi aheyn, laakiin kaliya Dhiyaanka Chanshan iyo xoogagga kale.
3 - Dhyân Chanshan wuxuu leeyahay laba dabeecadood maaddaama ay ka kooban yihiin:
(a) Caws, tamar aan midab ahayn, wax ku ool ah,
(b) miyirka caqliga leh ama miyir beelka kaas oo hogaaminaya oo hagaya tamarta, taas oo ah fikrada Dhyân Chôhanique oo ka tarjumaysa Fikirka Mindhiga Caalamiga ah.
Tani waxay keenaysaa taxanaha joogtada ah ee muuqaalka muuqaalka iyo saameynta anshaxa ee dhulka inta lagu jiro xilliyada caadada, dhammaan maadada Karma. Maadaama nidaamkani uusan mar walba kufiicsanayn, oo ay jiraan cadeymo badan oo muujinaysa jiritaanka sirta maamulka ee qarsoodi ah oo ka muuqda ilxidhka, waxa ay muujinaysaa cillado iyo cillado. iyo xitaa marar badan waxay keeneysaa guuldarro muuqda - waxay soo socotaa in midna looma baahna Legion (Demiurgos) ama mid ka mid ah awoodaha firfircoon ee shaqsi ahaan loo qaato waa ku filan tahay sharaf ama raali gelin.
All, si kastaba ha ahaatee, xaq u leedahay in la aqoonsado ixtiraamka aadanaha, iyo nin waa in ay had iyo jeer isku dayaan in ay caawiyaan horumar rabbaaniga ah ee Fikradaha, by noqoto sida ugu fiican ee uu awoodda, iskaashi ah ee dabiiciga ah ee hawsha xilliile ah. Kaliya waxa maqan iyo waxa unknowable Karana ah, sababta uncaused dhammaan sababaha, waa in ay leeyihiin ay Asheeraah iyo meeshii allabariga ku ah dalka quduuska ah weligiis muqaddas aan qalbigeennu - aan la arki karin, dhejisa, aan soo sheegnay, marka laga reebo by ah "cod jilicsan oo degan "miyirigeena ruuxiga ah. Kuwa caabudaa isagana waa inay sidaa sameeyaan in aamusnaanta iyo kelinimo quduus ka dhigay naftoodu, ay ruuxa dhexaadin kaliya iyaga iyo Ruuxa Universal ka dhexeeya samaynta, falalka wanaagsan ay wadaaddada oo keliya, iyo ujeedkooda dembiga leh oo kaliya dhibanayaasha gudi la arki karo iyo ujeedada loo bixiyey inuu tusniinta.
Goortaad tukanaysaan hadalka ha ku celcelinina sida dadka labaweji. laakiin u gal qolkaaga hoose, oo goortaad albaabkaaga xidhid, Aabbahaaga meesha qarsoon ku jira bari,
Aabahayagu wuxuu inooga jiraa "qarsoodi", Mabaadi'dda toddobaad ee ku jirta "qolka gudaha" ee dareenka nafta. Boqortooyada Ilaah iyo samadu waa inoogu jiraan, Ciise wuxuu leeyahay, ma banaanka. Maxay Masiixiyiintu u indha tireen macnaha ereyada xigmadda ah ee ay jecel yihiin inay ku noqdaan kuwo farsamo ahaan ah?
4 - Mawdhu waa daa'im. Waa saldhig, ama xarun jireed, kaas oo loo isticmaalo Universal Mind, Unique iyo Infinite, si loo dhiso fikradihiisa. Sidaa darteed esotericists u ilaaliyaan, in aan wax ka imanba ama "ku dhintay" ee dabiiciga ah, kala soocin ee sayniska dhexeeya labada isagoo sida sabab waa sabab lahayn iyo wax garad sabab. Inkastoo Sayniska qabaa waxaa laga yaabaa in - iyo Science saxda ah waa Dame a yeelsiiyeen, sida aynu wada ognahay by waayo-aragnimo - Occultism ogyahay oo bara ka duwan, maadaama ay waqti ka sameeyey xusuusan, tan iyo Manu iyo Hermes, ilaa si Paracelsus iyo waarayaashiisa.
Hermes Trismegistus, Three Times Great, ayaa leh:
Ilmahayga, arrintu waxay noqonaysaa; waxaa loo isticmaalaa, sababtoo ah arrintu waa gaadhi noqoshada. Noqoshadu waa qaabka waxqabadka aan la qoondeeynin iyo saadaalinta Ilaah. Markii la siiyay germiga noqoshada, arrintu [ujeeddadu] waa mid dhalan, sababtoo ah xoogga halabuurka ayaa qaabeeya qaababka ugu fiican. Qodobka aan weli soo saarin wax foom ah ma lahayn; waxay noqoneysaa marka la galo ficilka.
Dhanka kale, Dr. Anna Kingsford, oo ah turjumaan wanaagsan oo lafilayo Hermetic Fragments, wuxuu ku qornaa qoraallada: "Dr. Ménard waxa uu tilmaamayaa in Giriiggu erey isku mid ah oo macnihiisu yahay inuu dhalanayo oo noqdo. Fikradda halkan waa in arrinka dunidu ay ku jirtaa nuxurkiisa daa'imeed iyo ka hor intaan la abuurin ama 'noqdaan', waxay ku jirtaa xaalad aan rasmi ahayn. Tani waa sababta ay ahayd 'kahor' ka hor intaan lagu dhaqaaqin; hadda waa 'noqotaa', taas oo ah, waa mobile iyo horumarka.
Oo iyana waxay ku darayaa cilmiga la sifaynayo Vedantic of Philosophy Hermetic ah, in "abuurkii sidaas daraaddeed waa muddada hawlqabadka [Manvantara] Ilaah, kuwaas oo, sida ay Hermetic u maleeyay in [ama, sida Vedantins] wuxuu leeyahay labo hab - Hawsha ama Jiritaanka, Ilaah ayaa horumariyay (Deus explicitus), iyo Habboonaanta joogitaanka [Pralaya], ku lug yeelatay Ilaah (Labo Dhidid). Labada noocba waa kuwo aad u fiican oo dhammeystiran, sida ay yihiin xaaladaha soo toosidda iyo hurdada ee loogu talagalay dadka. Fichte, falsafada jarmalka, ayaa ku tilmaamay "Being" (Sein) inay tahay midda kaliya ee aynu ogaanno jiritaanka jiritaanka (Dasein) sida badan. Habkani waa aragtida Hermetic. 'Foomamka Fikradaha'? waa fikradaha maskaxda ama fikradaha caamka ah ee Neo-Platonists, fikradaha daa'imka ah iyo shakhsiyadeed ee waxyaabaha jira ee ka jira Muujinta ilaahnimada ka hor 'abuurista' ama noqoshada. "
Ama, sida falsafadda ee Paracelsus:
Miyay wax walba soo saaraan dadaal hal-abuur leh oo caalami ah? Ma jirto wax dhintay oo ku dhintay. Wax walba waa wax dabiici ah oo nool, sidaas darteed dunida oo dhan waxay u muuqataa inay tahay noolol nool.
5 - Cirifka ayaa laga soo qaatay qorshahiisa muhiimka ah, ee lagu hayo daa'in miyir la'aanta waxa Vedantins ugu yeeraan Parabrahman. Waa wax la mid ah natiijooyinka falsafadda reer galbeedka ee ugu sarreeya, Plato oo ah "fikrado cusub oo weligood ah iyo kuwo isa soo taraya", oo hadda ay qaadatay Von Hartmann.
Herbert Spencer's "Lama garan karo" wuxuu u egyahay waxyar uun 'transcendental Reality', kaas oo ay saaxiraddu rumeysan yihiin, oo inta badan umuuqata inay tahay shaqsiyad "xoog ka qarsoon ifafaale" - Awood aan xad lahayn oo waara taas oo dhamaanteed kasbato, halka qoraaga Falsafada ee miyirku uu yimaado (xiriirkan kaliya) sida ugu dhow xalka Suugaanta weyn sida qof dhimanaya uu awoodo. In yar ayaa ku dhiirrigelisay, midkoodna falsafaddi hore ama tan dhexe, inay u dhawaadaan ama xitaa xusayaan mawduucan. Paracelsus wuxuu ka hadlayaa iyada oo la adeegsanayo iyadoo fikradihiisu ay aad u wanaagsan yihiin oo uu soo diyaariyey Dr. F. Hartmann isaga oo adeegsanaya Paracelsus.
Dhammaan Masiixiyiintu waxay fahmeen fikirka asaasiga ah ee Bariga. Power Active, ee "mooshin Perpetual neefta ka Great," ayan ka soo toosin Kosmos marka waagu of Period kasta oo cusub, dhacna mooshin by yahay laba xoogagga ka soo horjeeda - ciidamada centripetal oo culus yihiin lab iyo haween, mid wanaagsan, iyo diidmo, jir iyo ruuxba, kuwaas oo wadajir u noqonaya Ciidamada Primal ee gaarka u ah - sidaas darteed ujeedada diyaaradda ee Illusion. Si kale haddii loo dhigo, dhaqdhaqaaqan labada ah wuxuu Kosmos ka soo qaataa diyaarad ka mid ah Aasiyada Bini'aadanimada ee muujinaysa muuqaalkii ugu dambeeyay, ama diyaaradda noumenal ah ee diyaarad caadi ah.
Wax kasta oo ay tahay, wuxuu ahaa oo dooni lahaa, inay si joogto ah u xajistaan, xitaa foomamka aan la tirin, kuwaas oo ah kuwo dhameystiran oo la baabi'in karaa oo keliya foomka ujeeddadooda, laakiin aan ku jirin Foomka Fikradda ah. Waxay u jireen sidii Fikrado Jaahilnimo ah, marka ay dhuuntaan waxay u muuqdaan kuwo muuqda.
Dhaqdhaqaaqa wuxuu baraa inaan foomka la siin karin wax, dabeecadda ama nin, iyada oo aan lahayn nooca ugu fiican ee horey u jirey diyaarad u gaar ah; in ka badan, in qaabkani ama qaabka uusan geli karin miyir-beelka, ama uu kobciyo malayshigiisa, iyada oo aan horey u jirin gobolka, oo ah ugu yaraan qiyaastii.
Ma ahan qaabka dadka, xayawaanka, dhirta, ama dhagaxa, weligeed "loo abuuray," oo kaliya waa diyaaradayada oo ay bilaabeen " noqdaan ", in uu yahay in la yidhaahdo in ay objectify in ay materiality joogo, ama soo kala bixiyeen gudaha ka baxsan, ka nuxurka ugu sublimated oo dheeraad ah super-dareen in muuqaalkiisa grossest . Haddaba sidaas daraaddeed aannu foomamka aadanaha ka jirey cadni ee ah sida xidiguhu ama prototypes éthrés, oo waxaa la sida laga soo xigtay kuwaas oo lagu daydo ashkhaas Ruuxaani ama ilaahyada, kuwaas oo waajib ay ahayd si ay u hesho in ay jiritaanka Ujeedada iyo nolosha dhulgariirka, ayaa horumariyay qaababka protoplasmic ee mustaqbalka ee Egos ee asalka ah. Markaas, sida ugu dhakhsaha badan this aadanaha Upadhi ama caaryada ee saldhigga u diyaar, Ciidamada jidhadhka dhulka dabiiciga bilaabay in ay ka shaqeeyaan kuwaas oo wasakhahaasi super-dareen oo ay ku qoran, ka sokow ay element gaar ah, in dhammaan noocyada cuntada ee la soo dhaafay iyo qaabkeeda oo dhan xayawaanka mustaqbalka ee adduunka. Sidaas darteed qolofka banaanka ah ee ninkii wuxuu dhex maray dhammaan warshadda iyo xayawaanka xoolaha, ka hor intaan la gelin foomka aadanaha.
Soo Koobid mabda'a qarsoon
7 cusub oo ka yimid 28,99 €
4 waxaa laga isticmaalay € 28,99
Iibso 29,00 €
ilaa Luulyo 11, 2020 8:42
Taariikhda lagu sii daynayo 1996-12-01T00:00:01Z
Publication Taariikhda 1996-12-01T00:00:01Z
Naga Ilaali (2019)
Allfa Toure on Bruly Bouabré, aliflaha alifbeetada Bété ee Ivory Coast: "Soo-jeedin wanaagsan oo Afrika loogu talagalay hibooyinkan, laakiin hoggaamiyayaasheena badankood waa dad roon, daawanaya, dad dufan ..." Jul 9, 10:25